Myanmar Law Center | Myanmar Law Center
Myanmar Law Center (မြန်မာဥပဒေများ)
“ဥပဒေတွေ ရေးထားတာ ဘာတွေမှန်း မသိဘူး။ နားမလည်ဘူး” လို့ ဆင်ခြေပေးပြီး၊ ရှောင်ကွင်းနေရင်တော့ သေချာပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင် ဒုက္ခရောက်ဘို့ များပါတယ်။ အဲဒီလောက် မခက်ပါဘူး။ ကြိုးစား ဖတ်ကြည့်ပါ။ ၅၀% မကတော့ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေ ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီမှာ ရှိတဲ့ နေထိုင်သူတိုင်း (နိုင်ငံသား+ နိုင်ငံခြားသား တိုင်း) လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် စည်းကမ်းမှ ကိုယ်မသိရင် အဲဒီတိုင်းပြည် ဘယ်လိုနေမလဲ? ဥပဒေဆိုတာ အများအားဖြင့် ချိုးဖောက်ရင် ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်တွေ ပါလာတဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မသိလိုက်လို့ ခံလိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင်၊ မသေချာလို့ သိချင်တဲ့အခါ ရှာလို့ရအောင်၊ ရည်ညွှန်းလို့ရအောင် ပြည်သူအများအတွက် ခေတ်အလိုက် ဥပဒေများကို မြန်မာနက်မှ စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
၁၈၀၀ မှ ယနေ့ထိ မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws from 1800s to Today)
မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား… ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
2020-09-02-၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊ စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ရက်နှင့်...
2020-08-28 – ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၇။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အပိုင်း ၁...
တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့်...
2020-08-26 – အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဥပဒေ
အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥ‌ပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2020-08-26 – ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၅။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်) နိဒါန်း နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြု၍...
2020-08-06 – ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကောင်စီဥပဒေ
အခန်း (၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကောင်စီဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည်- (က) ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့်...
2020-06-05 – တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၉။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့်...
2020-02-14 – လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ ။) ...
2019-12-27 – အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ
အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄၀ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2019-12-27 – ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၉ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့...
2019-12-24 – တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပဉ္စမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပဉ္စမအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၈ ။) (၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် ) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို...
2019-12-24 – အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပဉ္စမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပဉ္စမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၇ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2019-12-24 – ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပဉ္စမအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပဉ္စမအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၆ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2019-12-24 – သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေ
သွင်းကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှုဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၅ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့်...
2019-11-26 – မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၂ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2019-12-05 – မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာနှင့် လက်မှတ်များဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာနှင့် လက်မှတ်များဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၃ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်...
အခြေခံပညာရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၄။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို အခြေခံပညာရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။...
2019-11-08 – စကားရပ်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်သည့် ဥပဒေ
စကားရပ်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၁ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ (က) ဤဥပဒေကို စကားရပ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဥပဒေဟု...
2019-09-24 – ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၀ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊ စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ရက်နှင့်...
အပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၉ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၈ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အပိုင်း ၁...
2019-09-17 – ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေ
ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၇ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
2019-09-13 – ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၆ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်) နိဒါန်း နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြု၍...
2019-08-20 – ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကိုစတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကိုစတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၅ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၄ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၄ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊...
2019-08-05 – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို...
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၂ ။) ( ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက်) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။...
2019-06-10 – တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၁ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၈ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို...
2019-06-07 – အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ
အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၀ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက် ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်၊ အာဏာတည်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်များ...
2019-06-06 – မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၉ ။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၄ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ ၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို...